ဆီးသီးဈေးနှင့် ဆီးစေ့ဆီးဆန်ဈေး ကောင်းနေသော်လည်း အထွက်နှုန်းကျနေ၍ တရုတ်ဝယ်လက်ကိုသာ အားကိ? - Yangon Media Group
အောင်လံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇
ဆီးသီးဈေးနှင့် ဆီးစေ့ဆီးဆန်များဈေး ကောင်းနေသော်လည်း ဆီးသီးအထွက်နှုန်းများကျကာ တရုတ်ဝယ် လက်ကိုသာ အားကိုးနေရကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အောင်လံ မြို့နယ်အတွင်းမှ ဆီးသီးအဝယ်ဒိုင်များနှင့် ဆီးသီးစေ့နှင့် ဆီးဆန်ထုတ် လုပ်ရောင်းချသူများထံမှ သိရသည်။ ”အရင်နှစ်က အခုအချိန်ဆို ဆီးသီးကတစ်ရက်ကို တင်း ၁၅ဝ နဲ့ ၂ဝဝ အထိ ဝယ်ရပါတယ်။ အခုက တစ်ရက် ၁ဝ တင်းတောင်မ ရဘူး။ ဆီးသီးအထွက်က ဒီနှစ်ကရာသီဥတုဖျက်တော့ အသီးအပွင့် မကောင်းတဲ့အတွက် အထွက်ကျတယ်။ ဆီးသီးဈေးကတော့ အရင် နှစ်ထက် ပိုကောင်းပါတယ်”ဟု အောင်လံမြို့ဆီးသီးအဝယ်ဒိုင်မှ ဦးမြင်ဌေးက ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့ရှိ ဆီးသီးအဝယ် ဒိုင်များသို့ အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာများ၊ ဧရာဝတီမြစ်အနောက် ဘက်ကမ်းရှိ သရက်မြို့နှင့် ဆင် ပေါင်ဝဲမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများမှ ဆီး သီးများမှာ ရေကြောင်းနှင့် ကုန်း ကြောင်းဖြင့် ဝင်ရောက်နေသော် လည်း ယခင်နှစ်ထက်အဝင်နည်း ပြီး ဆီးသီးဈေးမှာလည်း ယခင်နှစ် ကတစ်တင်း ကျပ် ၁၇ဝဝ ရှိသော် လည်း ယခုနှစ်တွင် တစ်တင်းကျပ် ၃ဝဝဝ ဈေးရှိနေသည်။
”ဆီးသီးပေါ်ချိန်မှာတော့ အ ထွက်နှုန်းကျတော့ ပစ္စည်းကရှား တယ်။ ဆီးသီးရှားရတာက ဆီးပင် တွေခုတ်ပစ်တာနဲ့ ရာသီဥတုမိုးလေ ဝသမမှန်တာတွေကြောင့်ပါ။ ဆီးဆန်အထွက်ကလည်း နောက်ဆုံးမိုး ဖျက်တော့ အထွက်နှုန်းကကျတယ်။ အရင်ကဆီးစေ့နဲ့ ဆီးဆန်ကို ကိုရီးယား နဲ့ တရုတ်ကအပြိုင်ဝယ်တယ်။ အ ခုက တရုတ်ကပဲဝယ်တဲ့အတွက် တရုတ်ဝယ်လက်ကိုပဲ အားကိုးနေ ရတယ်”ဟု အောင်လံမြို့ရှိ ဆီးသီး ခွဲစက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် မညိမ်းညိမ်း ထွေးက ပြောကြားသည်။ ဆီးသီးစေ့ဆီးဆန်အစေ့ထုတ် လုပ်ကာ တင်ပို့ရာတွင် အညာဒေ သထွက်ဆီးချဉ်သီးကို ဝယ်လက် များက ပိုမိုအကြိုက်တွေ့ကာ ဆီး စေ့တစ်တင်းကျပ် ၁၅ဝဝဝ ဈေးနှင့် ဆီးဆန်တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၅ဝဝဝ ဈေးများရရှိကြောင်း သိရသည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းသို့ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံခြားသား ဝင်ရောက်မှု အနည်းငယ်မြင့်တ
ကျပ် ၁ဝဝဝ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် အထူးဆုကြီး ၁၄ ဆုအပါအဝင် ထီဆုမဲပေါင်း ၂၆၄ဝဝဝ ကျေ??